विश्वकप सेमिफाइनलः ५ रन बनाउँदा भारतले गुमायो ३ विकेट ! - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकप सेमिफाइनलः ५ रन बनाउँदा भारतले गुमायो ३ विकेट !
काठमाडौं, असार २५ । इंग्ल्याण्डमा जारी आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा न्यूजिल्याण्डले दिएको २४० रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा भारतले खराब सुरुताव गरेको छ । उसले ५ रन बनाउँदा महत्वपूर्ण ३ विकेट गुमाई सकेको छ । भारतले ३.१ ओभरको अवस्थामा विराट कोहली, रोहित शर्मा र केएल राहुल एक–एक रनमा गुमाएकाे हाे । विराट, केएल राहूललाई ट्रेन्ट बोल्टले र रोहितलाई म्याट हेनरीले आउट गरे ।
याे पनि पढ्नुस न्यूजिल्याण्डविरुद्ध भारतको लज्जास्पद हार
यसअघि भारतले पहिलो विकेटकारुपमा रोहित शर्मा ९१० लाई गुमायो । उनलाई म्याट हेनरीले आउट गरे । यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको न्यूजिल्याण्डले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २३९ रन बनायो । उसका लागि रस टेलरले ७४, कप्तान केन विलियम्सनले ६७, हेनरी निकोलशले २८, कोलिन डी ग्राण्डहोमले १६, जिमी नीशमले १२, टम लाथमले १०, मार्टिन गुप्टिल, म्याट हेनरीले एकएक, मिचेल सान्टनरले नट आउट ९ र ट्रेन्ट बोल्टले ३ रन बनाए ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप सेमिफाइनलः न्यूजिल्याण्डविरुद्ध जडेजाको अर्धशतक
बलिङमा भारतका भुवनेश्वर कुमारले ३, जसप्रित बुमराह, हार्दिक पाण्ड्या, युजवेन्द्र चहल र रविन्द्र जडेजाले एक–एक विकट लिए । मंगलबार पानी परेपछि ४६.१ ओभरमा रोकिएको बाँकी खेल आज भएको हो । उक्त अवस्थामा न्यूजिल्याण्ड ४६ं६ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २११ रन बनाएको थियो ।
ट्याग्स: INd Vs NZ